MALUNGA - Uhambo
MALUNGA NE-HVTN 702
YINTONI I-HVTN 702?
I-HVTN 702 luphononongo olukhulu oluvavanya ukuhlanganiswa kwezitofu ezivavanywayo ezimbini zokulwa i-HIV. Ezi zitofu zophononongo zibizwa ngokuba yi-ALVAC-HIV (vCP2438) ne-Bivalent Subtype C gp120/MF59. Ezona njongo ziphambili zolu phononongo zezi:
Ingaba ezi zitofu zikhuselekile ukuba zinikwe abantu?
Ingaba izitofu zingaluthintela ulosuleleko lwe-HIV?
Ingaba amajoni emizimba yabantu ayasabela kwizitofu zophononongo?
Izitofu ezisetyenzisiweyo kolu phononongo azenziwanga nge-HIV ephilayo, nge-HIV ebuleweyo, ngenxalenye ethathwe kwi-HIV, okanye ngeeseli zomntu owosulelwe nge-HIV. Izitofu ze-HIV ezivavanywayo zenziwe ngeekopi zamasuntswana osingosinga-HIV (zenziwe ngumntu). Ngako oko, izitofu AZINAKHO ukubangela ulosuleleko lwe-HIV okanye lwe-AIDS.
Ezi zitofu zophononongo ziyavavanywa. Oku kuthetha ukuba sisaziphanda kwaye siyaqhubeka ngokufunda malunga nokuba zikhuseleke kangakanani na ekubeni zisetyenziswe ebantwini nokubangaba ziza kuluthintela na ulosuleleko lwe-HIV.
Ezi zitofu zisetyenziselwa uphando kuphela. Azifumaneki kuluntu jikelele okanye azithengiswa. Ezi zitofu zinikezelwe ngabenzi bazo, i-Sanofi Pasteur ne-GlaxoSmithKline (GSK).
NDIXELELE OKUNGAKUMBI MALUNGA NE-HVTN 702 KUNYE NO-UHAMBO
Uhambo luludwe lweentlobontlobo zophononongo olusikhokelela kwisitofu esikhuselekileyo nesisebenzayo. I-HVTN 702 luphononongo lophando lwamva nje kuludwe lo-Uhambo. Uhambo luthetha uhambo, kwaye sikuhambo lokufumana isitofu esikhuselekileyo nesisebenzayo esiza kukhusela abantu kwi-HIV.
Olunye uphononongo olukhulu oluboniswe ngo-2009 okokuqala lwabonisa ukuba isitofu singayithintela i-HIV, ngendlela efanelekileyo. Olo phononongo lwalubizwa ngokuba yi-RV144 kwaye lwenziwa eThailand ngabantu abangaphezulu kuma-16,000. Ezo ziphumo zazichwayitisa, kwaye zabonisa ukuba isitofu sathintela ama-31.2% olwasuleleko olutsha lwe-HIV. Oku kuthetha ukuba iimveliso ezasetyenziswa kuphononongo lwe-RV144 zakwazi ukuthintela ulosuleleko lwe-HIV kumntu om-1 kwaba-3 abathathe inxhaxheba kuphononongo. Nangona oku kungazange kulunge ngokwaneleyo ukuba isitofu singafumana ilayisensi, uphononongo lona lanika oosonzululwazi imiqondiso nolwazi lokuba kudingeka bavelise izitofu ezingcono. Yiloo ndlela ke esaliqalisa ngayo olu hambo, saqala ngophononongo oluncinci olwalujonga ukhuseleko lwesitofu esivavanywayo ebantwini base-Afrika kunye nendlela asebela ngayo kuso amajoni omzimba, ngoku yi-HVTN 702.
Olunye lolu phononongo luncinci lwaziwa njenge-HVTN 100. Izitofu ze-ALVAC neseProteni ezisetyenziswe kwi-HVTN 702 zinikwe abantu abangama-210 eMzantsi Afrika kuphononongo olubizwa ngokuba yi-HVTN 100. I-HVTN 100 sisigaba solingo 1/2a apho abaphandi bafuna ukufunda ukuba ingaba izitofu ze-ALVAC neseProteni (isitofu esinye nezo sasetyenziswa kwi-HVTN 702) zikhuselekile na ukuba zinikwe abantu; ukuba abantu bayakwazi ukuthatha izitofu zophononongo ngaphandle kokuxhalaba; nendlela asebela ngayo amajoni omzimba kwizitofu zophononongo lwe-ALVAC neProteni. Iziphumo zethutyana ze-HVTN 100 zibonise ukuba ezi zitofu zi-2 zikhuselekile ukuba zinganikwa abantu kwaye zibanike iimpendulo ezilungileyo zamajoni omzimba. Akukhange kubekho zingxaki zempilo zimandundu ezinxulunyaniswe nezi zitofu. Nangona kunjalo, kusoloko kukho amathuba eengxaki angekabonwa okwangoku. Kungoko injongo enye yolu phononongo ikukuvavanya ukuba ingaba izitofu zikhuselekile kusini na xa zinikwe abantu abaninzi. Impilo yomthathi-nxaxheba ngamnye iza kujongwa ngeliso lokhozi kulo lonke uphononongo. I-HVTN 702 yahlukile kwi-HVTN 100 kuba kwi-HVTN 702, abaphandi ngoku bafuna ukufunda ngokuba ingaba izitofu ze-ALVAC nezeProteni zingaluthintela ulosuleleko lwe-HIV.
NGUBANI OQHUBA OLU PHONONONGO?
Olu phononongo luqhutywa yiNetwekhi yoLingo lweSitofu se-HIV (HVTN). I-HVTN nazo zonke iikliniki zophononongo ezithath’ inxaxhebazisebenzisana namahlakani oluntu ukuqinisekisa ukuba uphando lwamkelekile eluntwini lwengingqi kwaye luyazihlonipha iinkcubeko zengingqi.